Da Nyin thee or Jengkol or Dogfruit or Buah Jering has no Medicinal properties but toxic to Kidney | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« Requesting the Malaysian subsidiary of Asahi Kosei Japan Co Ltd to kindly withdraw the lawsuit against Myanmar workers’ rights defender
Shyah Fari Nikkah video »
Da Nyin thee or Jengkol or Dogfruit or Buah Jering has no Medicinal properties but toxic to Kidney.
Some people in Malaysia, Myanmar and ASEAN thought that the SMELLY-the-day-after-urine wasasign of bad toxic materials excreted out. But they are wrong. Most of the Myanmar doctors know about this. We have seenalot of dysuria, haematuria, renal failure patients in Myanmar because our people like to eat hundreds of specially boiled Da Nyin thee or Jengkols.
The beans are mildly toxic due to the presence of djenkolic acid, an amino acid, which causes djenkolism (jengkol bean poisoning). It causes “spasmodic pain, gout, urinary obstruction and acute renal failure“. [Wong, J. S., et al. (2007). Acute anuric renal failure following jering bean ingestion. Asian J Surg 30:1 80-1.]
The condition mainly affects men, and is not determined by how the beans are prepared, and individuals can consume the beans on multiple occasions without incident, to develop renal failure on another occasion. [Adler, S. G. and J. J. Weening. (2006). A case of acute renal failure. Clin J Am Soc Nephrol 1: 158-165.]
But almost all the other people outside our country and most of the doctors are not aware of this danger. After all I was shocked to hear the words ofavery famous (really good in operations) Urologist that he never heard nephrotoxic effects.
So no wonder this Star Newspaper is promoting this food here, “Snack much sought after for health properties” by FARIK ZOLKEPLI
KUALA TERENGGANU: The buah jering, which grows in the wild and is taken during meals as ulam (table salad) by many Malaysian families, has becomeamuch sought-after snack, thanks to 79-year-old trader Ali Omar here.
He sells it both asasnack and asacure for many types of ailments.
“The jering (which is actuallyatype of legume) is known to have medicinal benefits.
Healing food: Despite his age, Ali continues selling buah jering at his stall in Kampung Bukit Besar, Kuala Terengganu.
“It can reduce one’s blood sugar level and improve the digestive system.
“In the west coast it is taken as ulam but it is commonly prepared asasnack and eaten with coconut floss in the eastern states like Terengganu, Kelantan and Pahang,” he said.
“It’s not easy to prepare the snack as I have to boil the pod for about 14 hours and then deep fry the seeds with ingredients such as serai (lemon grass), ginger and sugar.
“It isapainstaking chore but I do it to help people.”
“If boiled wrongly, there could be side effects likeabad toothache,” said Ali, who sells the snack fromastall at Kampung Bukit Besar near here.
Although it started out asahobby, the father of six and grandfather of “dozens” said it had now become more than justaside income for him.
“Many customers come back for more as their health improved upon eating the snack regularly,” he said, adding that the jering snack has also done wonders for his family.
“It has producedastable income that has allowed my children to further their studies,” he said.
His only regret is that none of his children are keen to follow in his footsteps.
“The young people complain about the long hours of preparing the snack,” he said.
He added that he had hired an assistant because of his age.
Ali said the snack was only prepared during the hot season when the jering was easily available.
He said because of the weather in Terengganu, which becomes wet during the monsoon, he often has to buy the jering pods from Malacca and other places.
တညင်းသီးကို English လို Djenkol Bean လိုခေါ်ပြီး၊ သူ့ရဲ့ Scientific name ကတော့ Pithecolobium -lobatum လို့ဆိုပါတယ်။ တညင်းသီးမှာ လူကိုအကျိုးပြုတဲ့ ဗီတာမင်ဓာတ်ပါဝင်မှု မရှိပါဘူး။ သူ့မှာ ပါဝင်တာကတော့ လူကို ဒုက္ခပေး နိုင်တဲ့ အဆိပ်ဓာတ်ပါ။ တညင်းသီးမှာ Djenkolic acid ဆိုတဲ့ အဆိပ်တွေ ဝ.၃% ကနေ ၁.၃% အထိပါဝင်ပါတယ်။
တညင်းသီးဟာ အဆိပ်သင့်တတ်တဲ့အစားအစာ တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ တညင်းသီးအဆိပ်သင့် တာကို Djenkilism လို့ခေါ်ပါတယ်။ အဆိုးရွားဆုံးကတော့ ကျောက်ကပ် နှစ်ခုစလုံးတစ်ပြိုင်နက်ပျက်စီးပြီး အသက်ဆုံးရှုံးတဲ့အထိဖြစ်နိုင်တာပါပဲ။
တညင်းသီးပေါတဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ကရင်ပြည်နယ်၊ ပဲခူးတိုင်း၊ ရွှေကျင်နဲ့ သံတောင်ကြီးဒေသတွေမှာ တညင်းသီးအဆိပ်သင့်မှု အများဆုံးတွေ့ရပါတယ်။ ရာသီမှာ အဆိုးဆုံးဖြစ်ပြီး နှစ်စဉ် အဆိပ်သင့်မှု
ကြောင့် အသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေ ရှိပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အဆိပ်သင့်တဲ့အခါ ဆေးရုံ တက်ရောက်ပြီး
စနစ်တကျကုသမှု မခံယူရင်သေဆုံးဖို့ လမ်းပိုများတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
တညင်းသီးအဆိပ်ရဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံမော်လီကျုးကတော့ အပ်ချောင်းပုံလေးတွေကို ပုတီးသီသလိုသီထားတဲ့ပုံဖြစ်ပါတယ်။ တော်တော်ရှည်ပြီးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအလွယ်တကူချိတ်တွယ်နိုင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ ခန္ဓာကိုယ်မှာ အဆိပ်တွေဝင်လာရင် အသည်းက ပျက်ပြယ်အောင်လုပ်ပေးပါတယ်။ ကျောက်ကပ်
တညင်းသီးစားလိုက်ရင် ပါဝင်တဲ့ အဆိပ်တွေဟာ သွေးထဲကို အရင်ရောက်သွားပါတယ်။ ပြီးတဲ့ အခါ အသည်းကိုရောက်ပါတယ်။ အသည်းဟာ ခန္ဓာကိုထဲကို ရောက်လာတဲ့ အဆိပ်တွေကို ပျက်ပြယ်အောင်လုပ်ပေးနိုင်ပေမယ့် တညင်းသီးမှာပါတဲ့ အဆိပ်ကိုတော့ ပျက်ပြယ်အောင် မလုပ်နိုင်ဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။ အဲဒီအခါ ကျောက်ကပ်ကနေ စွန့်ထုတ်ဖို့ ကြိုးစားရပါတယ်။
ဒါပေမယ့် တညင်းသီးအဆိပ်မော်လီကျုးရဲ့ တည်ဆောက်ပုံကြောင့် ဆီးပြွန်ငယ်လေးတွေ ပိတ်ဆို့
နှစ်ခုစလုံးက ဆီးမထွက်နိုင်လို့ တင်းလာပြီး မခံမရပ်နိုင်အောင် နာကျင်လာပါမယ်။ သွေးထဲမှာ
Urea နဲ့ အဆိပ်အတောက်တွေများလာပြီး ဆေးရုံကိုအချိန်မီ တက်ရောက်ကုသမှု မခံယူရင် အသက်သေဆုံးနိုင်ပါတယ်။
ဒါကို ရုတ်တရက် ကျောက်ကပ်ပျက်စီးခြင်း (Acute renal failure) လို့ခေါ်ပါတယ်။ ကျောက်ကပ်သန့်စင်စက် (Renal dialysis) နဲ့ အချိန်မီကုသ နိုင်မှသာ အမြန်ဆုံး သက်သာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပျော်ဝင်နှုန်းက ဝ.၅% သာဖြစ်ပါတယ်။ တညင်းသီးကို ပြုတ်လိုက်ရင် အဆိပ်ဓာတ်နည်းနည်းသာ
ပျော်ဝင်ပြီးပြည့်ဝသွားတဲ့ အတွက် အဆိပ်တွေထပ်ပြီးမပျော်နိုင်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် ရေနဲ့ပြုတ်တဲ့
အနည်းဆုံး သုံးကြိမ်မှ ငါးကြိမ်ထိ ရေများများနဲ့ ပြုတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပြုတ်ပြီတဲ့ ရေတွေကိုလည်း သွန်ပစ်ပြီး ရေအသစ်နဲ့ ထပ်ပြုတ်ရမှာပါ။ ဒါဆိုရင်တော့ အန္တရယ်တော်တော်လျော့သွားမှာပါ။ တညင်းသီး အဆိပ်ဟာ ၃၀၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် ကျော်မှသာ ဓာတ်ပြယ်ပျက်စီးပါတယ်။ ရေဆူမှတ်ဟာ ၁၀၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်သာ ရှိတာကြောင့်ဘယ်လိုမှ ဓာတ်မပြယ်နိုင်ပါဘူး။ တကယ်လို့များ မီးဖုတ်ပြီးစားရင် အဆိပ်တွေဟာ ဓာတ်လည်းမပြယ်၊ အပြင်လည်းမရောက်တော့
သိပ္ပံနည်းအရ pH များလေလေ ပျော်ဝင်မှု Solubility များလေလေဖြစ်ပါတယ်။ အနံ့ပြင်းပြင်း၊ အဆိပ်ပြင်းပြင်း တညင်းသီးစားပြီးတဲ့အခါ ပါးစပ်မှာနံနေတာ၊ ဆီးသွားရင် အနံ့ဆိုးတာတွေဟာ ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ အဆိပ်တွေဝင်နေပြီလို့ ဆိုလိုတာပါပဲ။
ဒါကြောင့် စားပြီးရင် ခန္ဓာကိုယ်ကိုလည်း ဒုက္ခပေးသလို အိမ်သာထဲမှာလည်း အနံ့ဆိုးပေတဲ့ ဒီလို အသီးကို အားလုံး တတ်နိုင်သမျှတော့ မစားသင့်ဘူးလို့ ထင်ပါတယ်။
Credit: ဒေါက်တာ ခင်မောင်လွင်
Tags: Asean, Chronic kidney disease, Health, Kelantan, Kidney, Malaysia, Renal failure, Terengganu
This entry was posted on June 26, 2011 at 2:07 pm and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.
6 Responses to “Da Nyin thee or Jengkol or Dogfruit or Buah Jering has no Medicinal properties but toxic to Kidney”
June 15, 2014 at 4:09 am | Reply
Hello dr Kokogyi
I would like to import dogfruits from malaysia, could you give me the contact details Mr Ali. Will aapreciate yr favor,
June 15, 2014 at 4:38 am | Reply
But I have no contact with the person you mentioned, sorry.
If you’d like to import from indonesia let me know. Lots of it here!
October 7, 2015 at 4:28 am | Reply
Toxic to kidney yet those who eat this jengkol somehow live long years hahaha
October 15, 2021 at 5:52 am | Reply
Dr Myat See Zar USA
English အချေါ Stinky beans မလေး စလုံး အချေါ Jenkol ဗမာအချေါ Dahendi. အာရှထဲ အမြိုးသား အမြိုးသမီး အမြားဆုံး ကွိုကျကွတယျ။ ကနြောက ကနျြးမာရေး ရှူ့ထောငျ့ကထကျ အနံ့မခံနိုငျတာပါ ။
ဒီဘကျမှာ ထိုငျးဆိုငျ ဗမာဆိုငျတှမှော လတျလတျဆတျဆတျရတတျပါတယျ
မခငျအုနျးမွငျ့ အငျမတနျကွိုကျရှာတယျ ဒါကွောငျ့ ကနြောအမွဲဝယျပေးရပါတယျ ပွီးရငျသူ့ဆေးပါဆကျကု့ပေးရတယျ။
ကနြော့ညာလကျရုံ Roser အိမျမှာ စအလုပျဝငျစ အဲ့သညျ Dahendi သီးပွသာနာ အကွီးအကယျြတကျတာ ပွော ပွမယျ အိမျမှာအဖနေဲ့ ကနြောကလှဲရငျ အကုနျစားထားကွပွီး ရအေိမျဝငျကွတာကိုး😁 အဲ့တော့ မရှေ Roser က မက်ကစီကို လူမြိုး အဲ့ဒီအနံ့ကို ခမြား က ရအေိမျ မိလ်လာ ပိုကျ ပကျြနပွေီဆွိုပီ အလုပျထဲ ကနြောဆီ ဖုနျးဆကျလာပါလရေော ဟာ ကနြော မယျခေါငျးနံပနျးကွီး Roser ကို အသအေခြာ မေး မိလ်လာပိုကျတှေ ပွုပွငျပေးတဲ့ ဆာဗဈကို လှနျအကွောငျးကွား ပွငျခိုငျးဘို့ အိမျလိပျစာပေးပွီလှတျမိပါရော။
နလေညျစာ စားနခြေိနျ ဆာဗဈကဖုနျးဆကျလာတယျ မငျးအိမျမှာ ဘာပွသနာမှ မရှိဘူးတဲ့ ဒါနဲ့ မရှေ Roser ဆီကိုဖုနျးထကျချေါပွီ ထကျမေး ဘယျနရောကမငျးအနံ့ရတာလဲ ငါ့အိပျခနျးရော ရအေိမျရောစဈလားဆိုတော့ အေ နငျ့အိပျခနျးတခု့ကလွှဲပီး တအိမျလုံး နံ့သတဲ့ အငျး Dahendi အနံ့ကို မိလ်လာပိုကျနဲ့ မှားတဲ့ မက်ကစီကိုမ ကနြော့ညာလကျရုံလေ😁။
တညငျးသီး ကို ကနြော့အမြိုး ရိုဟငျဂြာတှလေညျး အငျမတနျကွိုကျရှာတယျ သူတို့စားပုံကမှ့တကယျ အားပါတရနျော့ ဇလုံ ကွီးတခု့ထဲထညျွ့ပီ ဆီနဲ့ဆားရောထားတဲ့ ဆီခှကျကွီးထဲတို့တွို့ပီးစားတာရယျ ကနြောက နားရကျတိုငျးနီးနီးက ရိုဟငျဂြာစငျတာဘကျအမွဲရောကျတတျတယျ ရိုဟငျဂြာလို Gazal song
ဆိုတာတှေ ကနြောက အရမျးကွိုကျတယျ နားထောငျ ဘို့သှားရငျး လွူကီးတှနေဲ့စကား ပွောတာ ပါ တခါသာ Shamshul Alam ဆိုတဲ့ တယောကျ အိုဘာအိုမာနဲ့ ထအျောပါလရေော ဟာဘာဖွဈတာလဲပေါ့ ထပွေးပွီးသူ့ကိုစမျးသပျမေးမွနျးပွီးမှ့သိရတာ ဆီးမသှားနိုငျလို့အျောနသေတဲ့လေ။
အဲ့တော့စောန ဘရိုဇာရီတငျထားတဲ့ တညငျးသီး Stinky beans or Jekol Dahendi က ကောငျးကြိုးလားဆိုးကြိုးလားတော့မသိဘူး အနံ့ တော့မခံနိုငျဘူးလေ။😁
Stinky beans ကအစိမျးရောငျ Dahendi အနံ့ နဲ့ဆငျးတဲ့ အသီးကိူလညျး ချေါါပါတယျ။ ဟာသအနနေဲ့ဖတျပါ။
October 15, 2021 at 6:04 am | Reply
Once I was on-call duty in SU2. Paediactric Nurse called me to intubatea10 yr old child with Acute Retention of Urine, because Paediatric Surgeon U Han Saw and assistant Dr U Myo Nyunt were in the operation theatre. While I asked the history, checked the distended bladder and stated preparing for catherization. I don’t know that Dr U Han Saw came out from the operation theatre and was watching from the back.
When he advised me to squeeze the boy’s penis like ‘milking the cow’ I was scared and done as what he ordered or suggested. Suddenly the white cheesy thing like soaked chalk came out as ifasqueeze the toothpaste, followed by gush of urine flow.
This was my ONE and ONLY experience of Acute Retention of Urine after Da Nyin thee or Jengkol or Dogfruit or Buah Jering.
All the Myanmar doctors even GP knew that Da Nyin thee could cause Haematuria, stone or UTI symptoms. I even seen one of my House Surgeon’s brother,a3rd. MB student died of renal failure after eating 150 Da Nyin thees.
But in Malaysia they don’t eat much except Myanmars. Even the very famous Urologist admit that he don’t know about Nephrotoxicity of Da Nyin thee. After I mentioned about that he kept quiet and next day only he admitted to me (after reading at home) about Da Nyin thee. @ https://drkokogyi9.wordpress.com/2021/08/08/my-beloved-best-surgeon-professor-dr-u-han-saw/